Tamarta Wax-qabad ee Bilaashka ah * Deeqda Duufaanta Duufaanta - Tamarta Ku-Saleysan
Bilaash * Deeqda kululeeyaha iyo kuleylka kuleylka
Deeq loogu talagalay dadka hela gunnada ama dakhliga hooseeya
Dib-u-habaynta qaboojiyaha bilaashka ah
Deeqo siinta rakibidda kuleylka buuxa
Deeqaha laga helo guud ahaan Ingiriiska
Guryaha dhirta ayaa sidoo kale u qalma
Riix halkan si aad u dalbato!
Iyada oo ay Dawladda Caawinayso Qorshaha Cabbirka, waxaad xaq u yeelan kartaa mid ka mid ah nooDeeqaha Deeqaha Bilaashka ah
Miyaan u qalmaa kuleyliye bilaash ah?
Waxaa jira siyaabaha ugu muhiimsan ee 3 ee aad u-qalantid mid ka mid ah deeqaha saliidda ee saliidda ah:
Haddii aad qaadato macaashka u qalma
Haddii aad dakhligaagu hooseeyo oo aad leedahay kuleyl aad u sareeya *
Haddii aad leedahay dakhli hooseeya oo qof ka tirsan gurigaaga uu leeyahay xanuun muddo dheer ah *
* Xannaanooyinka ugu dambeeyay ee 2 waxaa laga heli karaa oo kaliya degaannada maamullada degaanka qaarkood, haddii aadan kufarin laakiin aad dakhligaagu hooseeyo, fadlan nala soo xidhiidh waxaanna xaqiijin doonaa haddii degaankaaga maamulku uu daboolo nidaamkan
Waan ka xunnahay, laakiin deeqaha lama bixiyo guryaha bulshada.
Faa'iidooyinka noocan ah?
Waa inaad u qalantaa haddii adiga, ama qof kasta ee ku nool gurigaaga uu helo mid ka mid ah manfacyadaas:
Anigu ma ihi faaiido laakiin waxaan ku jiraa dakhli hoose ama jirro xanuun, miyaan u qalmaa?
Degmooyinka qaarkood waxaa suurtagal ah in aad xaq u yeelatid deeqda kulaylka haddii aad dakhligaagu hooseeyo oo aad leedahay kulayl aad u sareeya, tusaale ahaan waxaad ku nooshahay guri weyn oo leh derbi adag, ama haddii aad ku jirto dakhliga hoose iyo qof gurigaaga ka mid ah oo qaba jirro muddo dheer ah oo laga yaabo in xaaladaha qaarkood ay ka mid yihiin arrimaha caafimaadka maskaxda. Waqtigan xaadirka ah ee koonfur-galbeed waxaa ku jira qorshahan oo ay ku jiraan Cornwall, laakiin maamulka degaanka ee ku yaala Ingiriiska ayaa sidoo kale saxiixaya. Haddii aad aaminsan tahay inaad ku haboon tahay shuruudahaan fadlan nala soo xidhiidh, waxaanu u baahan doonaa inaan ku weydiino su'aalo taxane ah oo aan ogaano nooca dawladda hoose ee gurigaagu ku hoos yimaado. Waanu xaqiijin doonaa haddii aan awoodno inaan kaa caawinno deeqda kuleylka.
Miyuu beeraha iyo caravans ku daboolayaa deeqdan kuleylinta?
Haa! Guryaha park iyo caravans waxay xaq u leeyihiin casriyeynta kululaynta ee ku xiran qofka guriga ku nool ee u qalma sida kor ku xusan. Haddii qofku ku nool yahay guriga park waa faa'idooyin ay u baahan yihiin in laga diiwaangeliyo cinwaanka guriga park. Haddii faa'iidooyinka aan laga diiwaangelinin guriga parkka, weli waan awoodnaa inaan caawino laakiin waxaan u baahanahay caddayn in qofku uu ku nool yahay guriga beerta sida warqadaha bangiga, biilasha cashuurta kawnsalka iwm.
Si aad u codsato ama u ogaato wax dheeraad ah, fadlan buuxi foomka xiriirka bogga kore ee boggan ama wac lambarka hoose
Riix halkan si aad u dalbato Email hadda!
Haddii aad aaminsan tahay in aad xaq u leedahay, waxaad dalban kartaa codsigaaga adoo helaya qofka qaata faa'iidooyinka si loo buuxiyo foomka jeeg helitaanka internetkahalkan
* Haddii aad qaadato Tax Credit ama Universal Credit, xaq u yeelashadaada ayaa ku xirnaan doonta qadarka dakhliga ugu badan kaas oo ku saleysan inta qof ee waaweyn iyo caruurta ku nool gurigaaga. Fadlan nala soo xiriir si aad u ogaatid wax badan ama fiiri jadwalka hoose.
Dakhli sannadeedka ugu badan ee canshuur celinta
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri deeqda kuleylka bogga
Wac Damiinka Tamarta hadda si aad u ogaato haddii aad u qalanto.
Warshad Saliideed oo bilaash ah oo laga helo Shirkadda "Energy Energy" waxay heli kartaa guryaha guryaha ku yaala Great Britain
Iyadoo ku xiran xajmiga aqalkaaga, noo saliidda shidaalkamacnaheedu waxaa weeye in aan si buuxda kuugu soo bandhigi karnokuleylaha bilaashka ah, laakiin mararka qaarkood, badanaa guryaha aadka u yar, deeq bixiyayaashakuma filna inay shaqadu bilaash u noqoto oo tabarucaadana loo baahdo, laakiin waxaan ku xaqiijineynaa baaritaan lacag la'aan ah.
Qiyaas ahaan waxa lagu dabooli doonaa gunnada deeqda?
Guryaha waaweyn (gaar ahaan kuwa leh derbi adag) - kor u qaadida saliidda bilaashka ah
Guryaha yaryar ama kuwa horey u wanaagsanaa ayaa la daboolay - waxaa laga yaabaa inaad ka qayb qaadato kharashka shaqada
Haddii aynu nahay deeq bixiyayaashaiyo deeqaha kululeeyaha Ha daboolin dhammaan kharashka shaqooyinka, waxaad bixin kartaa kala duwanaanshaha, tixgelin kartaa xirmo maaliyadeed oo aanu qaban karno (ku xirnaanta xaaladda amaahda) ama haddii hantidaada la kireeyo, waxaa laga yaabaa inaad ka codsan kartid mulkiilaha inuu ku biiro sidii waa hantidooda ka faa'iideysanaysa casriyeynta.
Dooro Tamarta Qodobka loogu talagalay shaqada aad qabatey
Nidaamyadayada maxalliga ahi waa kuwo dhammaantood tababarayaasha Gas Gas ama Oftec u qalma
Mashiyeyaashayadu waa xirfadlayaal waxayna sameeyaan intii karaankooda ah si ay u ilaaliyaan nadaafadda iyo hagaajinta inta lagu jiro rakibidda
Waxaanu daryeeli karnaa boorsadaaga muddada dammaanadda